Marquette Park ၏မဟာမိတ်များ• DutchtownSTL.org • Dutchtown, St. Louis, MO
Marquette Park ၏မဟာမိတ်များသည် Marquette Park ကို ပြန်လည်အသက်သွင်းရန်အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး Dutchtown နှင့် South Side အသိုက်အဝန်းအတွက် ပိုမိုတန်ဖိုးရှိသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာစေရန် ရည်ရွယ်ထားသော အိမ်နီးချင်းအုပ်စုဖြစ်သည်။
Marquette ပန်းခြံ Dutchtown areaရိယာထဲမှာအကြီးဆုံးပန်းခြံဖြစ်ပါတယ်။ Marquette သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြီးထွားလာသောရပ်ကွက်၏အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သင့်သည်။ တင်းကျပ်သောဘတ်ဂျက်နှင့်ရက်ရွှေ့ဆိုင်းပြုပြင်ခြင်းသည်ဥယျာဉ်တွင်နည်းများစွာရှိသည်။ amp ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများထိုက်သင့်သည့်စံနှုန်းများနှင့်အညီ Marquette Park ကိုဆောင်ကြဉ်းရန်အတွက်အတိုးနှင့်ရန်ပုံငွေများရှာဖွေရန်ကြိုးစားသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်နွေရာသီမှာ amp ပန်းခြံနှင့်၎င်း၏အဆောက်အအုံများကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့ပြီး၊ အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်နေရာများစွာကိုစာရင်းပြုစုခဲ့သည်။ ရပ်ကွက်အတွင်းရှိလူများအနေဖြင့်မည်သည့်တိုးတက်မှုကိုမြင်ချင်သည်ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အိမ်နီးချင်းများနှင့်ပန်းခြံအသုံးပြုသူများကိုလည်းသူတို့လေ့လာခဲ့သည်။
၂၀၁၁ ခုနှစ်ဇူလိုင်လမှာ Marquette Park ၏မဟာမိတ်များသည်ဒေါ်လာ ၇၀၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည် အဆိုပါ Marquette ပန်းခြံရေကူးကန်မှတိုးတက်မှုသည်။ ရန်ပုံငွေများကိုရေကူးကန်ပရိဘောဂများနှင့်ပတ် ၀ န်းကျင်ခြံစည်းရိုးမှဆူးဝါယာကြိုးကိုဖယ်ရှားခြင်းဖြင့်ရေကန်ကိုပိုမိုကြိုဆိုပွဲနှင့်လည်ပတ်နိုင်စေရန် Marquette Park Pool သည်စိန့်လူးဝစ္စစီးတီးတွင်အကြီးဆုံးသောအများပိုင်ရေကန်ဖြစ်သည်။
2021 ခုနှစ် ဆောင်းဦးတွင်၊ Marquette Park ၏မဟာမိတ်များသည် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပုဂ္ဂလိကအလှူရှင်များနှင့် စိန့်လူးဝစ်မြို့ SC မေဂျာလိဂ်ဘောလုံးအသင်းတို့ ပူးပေါင်းကာ အသစ်ထည့်သွင်းရန်၊ ဖူဆယ်ကွင်း Marquette Park မှာ။ စောင့်မျှော်လျက်၊ Marquette Park ၏ မဟာမိတ်များက ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။ ဘောလုံးအဆောက်အဦများ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် ပန်းခြံမှာနေပြီးစိန့်လူးဝစ်မှာဘောလုံးသွားလိုတဲ့နေရာတစ်ခုအဖြစ် Marquette ကိုတည်ထောင်ပါ။
သင်လုပ်နိုင်သည် လှူဒါန်း amp's အားထုတ်မှု ဖြတ်. Dutchtown ပင်မလမ်းများDutchtown ၏ ၅၀၁ (ဂ) (၃) အကျိုးအမြတ်မယူသောရပ်ကွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့။
ဒီစာမျက်နှာကိုမျှဝေပါ Facebook က, တွစ်တာဒါမှမဟုတ် အီးမေးလ်လိပ်စာ။ ဤစာမျက်နှာကိုနောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် အောက်တိုဘာလ 21st, 2021 .
ဒိန်းမတ် Marquette ပန်းခြံ၏မဟာမိတ်များ